PERIKOPA FJKM ALAHADY 21 DESAMBRA 2014 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 21 DESAMBRA 2014
2 Samoela 7 : 18-24 / Lioka 1 : 39-56 / Titosy 3 : 3-7
2 Samoela 7 : 18-24
18 Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan’i Jehovah ary nanao hoe: Zinona moa aho, Jehovah Tompo ô? Ary zinona ny mpianakaviko, no novimbininao ambaraka ankehitriny aho?
19 Ary mbola ataonao ho zavatra kely ihany aza izany, Jehovah Tompo ô, fa, indro, efa voalazanao koa ny amin’ny taranaky ny mpanomponao hatramin’ny mbola any aoriana lavitra aza. Ary izany dia fanaon’ny olona, Jehovah Tompo ô.
20 Ka inona intsony no holazain’i Davida aminao? Fa Hianao, Jehovah Tompo ô, no mahalala ny mpanomponao.
22 Koa amin’izany dia lehibe Hianao, Jehovah Andriamanitra; fa tsy misy tahaka Anao, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy Hianao araka izay rehetra ren’ny sofinay.
23 Ary aiza moa no misy firenena etỳ an-tany tahaka ny Isiraely olonao, izay nalehan’Andriamanitra havotana ho olony, sy hanaovany anarana ho Azy, ary hanaovany zavatra lehibe ho anareo sy zava-mahatahotra ho an’ny taninao teo anatrehan’ny olonao, izay navotanao ho Anao avy tamin’ny firenen’i Egypta sy ny andriamaniny?
Lioka 1 : 39-56
39 Ary Maria niainga tamin’izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin’ny tany havoana, ho ao an-tanàna anankiray any Joda;
40 ary niditra tao an-tranon’i Zakaria izy ka niarahaba an’i Elizabeta.
41 Ary rehefa ren’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria, dia nibitaka* ny zaza tao an-kibony; ary nofenoina ny Fanahy Masina Elizabeta,[*Na: niantsambotra]
42 dia niantso tamin’ny feo mahery hoe izy: Voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy ny hateraky ny kibonao.
43 Avy aiza no ahatongavan’izao amiko, no mba vangian’ny renin’ny Tompoko aho?
44 Fa, indro, raha vao ren’ny sofiko ny feon’ny fiarahabanao, dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ao an-kiboko.
45 Ary sambatra ianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao.
47 Ary ny fanahiko efa ravoravo tamin’Andriamanitra, Mpamonjy ahy;
48 Fa efa nijery ny fahambani-toetry ny ankizivaviny Izy. Fa, indro, hatramin’ny ankehitriny dia hataon’ny taranaka rehetra ho sambatra aho.
50 Ary ny famindram-pony dia amin’izay matahotra Azy hatramin’ny taranaka fara mandimby.
51 Nanao asa lehibe tamin’ny sandriny Izy; Nampihahaka ny mpiavonavona tamin’ny fiheveran’ny fony Izy.
52 Nampiala ny lehibe tamin’ny seza fiandrianany Izy, Ary nanandratra ny ambany kosa.
54 Niahy an’isiraely mpanompony Izy, fa nahatsiaro ny famindram-pony
55 (Araka ny voalazany tamin’ny razantsika), tamin’i Abrahama sy ny taranany mandrakizay.
56 Ary Maria nitoetra teo amin’i Elizabeta tokony ho telo volana vao nody tany an-tranony.
Titosy 3 : 3-7
3 Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon’ny filàna sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin’ny lolompo sy ny fialonana, sady hala no nifankahala.
4 Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona,
5 dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina,
6 Izay naidiny betsaka tamintsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika,
7 mba hohamarinina amin’ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 15 décembre 2014